Dib-u soo noolaynta Cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka gobolka Bakool (Warbixin) | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Bulsho kasta oo deegaan ku nool waxay leedahay dhaqammo iyo ciyaaro u gaar ah ,waxaana jira cayaaro aad looga xiiseeyo deegaannada Gobolka Bakool waxaana ka mid ah ciyaarta loo yaqaanno “kobdhow” waana mid bulshada soomaaliyeed ka wada siman yihiin oo xilliyadii hore lagu tababaran jiray si xilliyada qaarkood qofku ku dagaallami jirey.
Galab walba marka salaada casar laga soo baxo ,waxaa isugu yimaada fagaare ku yaal Gobolka Bakool dad badan oo cayaartaan daawada waxana ku tartamayaa labo koox, oo isugu jira dad da’ah iyo dhalinyaro, waxa la kala tirsadaa dhibco buug lagu qoro, waxa kale oo lagu xisaabiyaa xariijimo dhulka laga jeexo oo dadka oo dhan wada arkayaan, kooxdii laga badiya waxaa ay shaah u iibisaa kooxda badisey, waxaana lagu dur tiriyaa geeraar ma jirto wax intaa ka badan oo lagu kala helo.
Maxamed Maxamuud Mursal waxa uu hoggaan u yahay mid ka mid ah kooxaha, waxuuna cayaartaan bilaabay isagoo jira 15 sano waxan kala sheekeystey cayaarta iyo qalabka loo isticmaalo…….
Isaak Cabdinuur waa 83 sano jir inta badan waqtigiisa ku soo qaatay cayaartaan “Kobdhowka” kuna xeeldheeraa sameynta qalabka loo adeegsado wuxuuna iiga waramay inuu yahay macalin dadka ku kala saara wixii ay ku murmaan….
Previous articleMaxkamadda CQS oo xukun dil ku riday Xubin Al=-shabaab ah
Next articleMadaxweyne ku-xiggeenka Hirshabeelle oo tababar u xiray Cutubyo Boolis ah.